Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) - Hello Sayarwon
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း)
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 04/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) ကဘာလဲ။
စအိုနာကျင်ခြင်းဆိုတာ စအိုအတွင်းနဲ့ စအိုဝတဝိုက်မှာ နာကျင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ စအိုနာကျင်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းအများစုက ကင်ဆာမဟုတ်ပေမယ့် နာကျင်ခြင်းကတော့ ဆိုးရွားလှပါတယ်။ စအိုတဝိုက်မှာ အာရုံကြော လမ်းဆုံးတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စအိုနာကျင်ခြင်းဟာ အူလှုပ်ရှားမှု မတိုင်မီ၊ လှုပ်ရှားနေချိန်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သာမန်နာကျင်ခြင်းကနေ ဆိုးရွားလွန်းပြီး ပုံမှန် လှုပ်ရှားမှုတွေကို အနှောက်အယှက်ပေးလောက်တဲ့အထိ နာကျင်တတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပြီး အများစုဟာ ကုသလိုပ ပျောက်ကင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စအိုနာကျင်နေခြင်းဟာ ၂၄-၄၈နာရီအတွင်း မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ နာတဲ့အပြင် အဖျားရှိရင် ပိုပြီး ပြသသင့်ပါတယ်။
စအိုနာကျင်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ စအိုကနေ သွေးယိုခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပိုပြီး စိုးရိမ်ရပါတယ်။ နာကျင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ မိမိဖာသာ ဝယ်ယူသေယက်သုံးနိုင်သော ဆေးဝါးများ၊ ရေနွေးနွေးစိမ်ခြင်း စတာတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လက္ခဏာတွေကတော့ ဘာဖြစ်သလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဝမ်းသွားစဉ်မှာ ဆိုးရွားပြင်းထန်စွာ နာတတ်ပါတယ်
ဝမ်းသွားပြီး အချိန်ကြာတဲ့အထိ ပူပြင်းကိုက်ခဲ တတ်ပါတယ်။
စအိုမှသွေးထွက်ခြင်း။ အိမ်သာသုံးစက္ကူမှာ သွေးအနည်းငယ်စွန်းထင်းတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
လိပ်ခေါင်းဆီသွားသော သွေးစီးဆင်းမှု ပိတ်ဆို့လျှင် နာကျင်တတ်ခြင်း
ဂရင်ဂျီနာ (သို့) ပြည်တည်နာ
ဆက်တိုက်နာနေတတ်ပြီး ထိုင်သောအခါ ပိုဆိုးခြင်း
ဝမ်းသွားစဉ် ပြည်၊ သွေးပါခြင်း
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာများစွာ ရှိပေမယ့် အောက်ပါ အခြေအနေတွေက အများဆုံး ဖြစ်စေပါတယ်။
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယရှိရင် အူလမ်းကြောင်း စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
စအိုတွင်း လက်ချောင်းထည့်ပြီး စအိုကြွက်သား အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ စအိုကြွက်သားဟာ တောင့်တင်းပြီး ထိမိချိန်မှာ နာကျင်တတ်ပါတယ်။
စအိုလမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးပြီး လိပ်ခေါင်းသွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
စအိုကွဲခြင်း ရှိမရှိ မျက်မြင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Acid Beta-Glucosidase Deficiency (Acid beta-glucosidase ချို့တဲ့ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အောက်ပါကုသမှုတွေဟာ လိပ်ခေါင်းကြောင့် နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ရေနွေးနွေးမှာ တခါစိမ် မိနစ် ၂၀ခန့် တနေ့လျှင် အကြိမ်များစွာစိမ်ခြင်း
ဝမ်းပျော့ဆေး၊ အမျှင်ဓါတ်များ စားပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှု ကောင်းစေခြင်း
အောက်ပါကုသမှုတွေဟာ စအိုကွဲခြင်းကြောင့် နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ရေနွေးနွေးမှာ တခါစိမ် မိနစ် ၂၀ခန့် တနေ့လျှင် ၃ကြိမ်ခန့်စိမ်ခြင်း
ဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုမ်း၊ ထုံဆေးများသုံးပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေခြင်း
စအိုနာကျင်ခြင်းဟာ သိပ်မကြာတတ်လို့ ဘယ်ကုသမှုကမှ နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ မလျင်မြန်ပါဘူး။ လတ်တလောမှာ ရုတ်တရက်နာကျင်ခြင်းအတွက် ဆေးမရှိပပါဘူး။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက စအိုနာကျင်ခြင်း အတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
အမျှင်ဓါတ်များတဲ့ အစာတွေ စားခြင်း၊ ရေများများသောက်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းကိုပျော့ပျော့သွားစေတာကြောင့် စအိုလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှုနည်းစေပါတယ်။
Acid beta-glucosidase deficiency. http://www.healthline.com/health/gaucher-disease#overview1 . Accessed June 10, 2017.
Acid beta-glucosidase deficiency. http://www.rightdiagnosis.com/g/gaucher_disease_type_1/intro.htm . Accessed June 10, 2017.
Acid beta-glucosidase deficiency. https://www.aarpmedicareplans.com/channel/gauchers-disease_doctorspecialties . Accessed June 10, 2017.